Ingxoxo yevidiyo Iqhubeka Ngokujwayelekile Kwamawebhusayithi Wenkampani kanye Nezingxenyekazi ze-Ecommerce | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 26, 2018 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
ISalesforce ishicilele i-athikili enemininingwane ne-infographic kumthelela nemikhuba emihle yengxoxo yevidiyo yesevisi yamakhasimende. Lesi siteshi sesevisi yamakhasimende sihlanganisa ithuba lengxoxo ebukhoma kanye nokushaya ucingo nokuthinta ividiyo uqobo. Ngomkhawulokudonsa omningi, i-5G isivinini ekhoneni, nezithuthukisi ezibalulekile kubuchwepheshe bokuxhumana bevidiyo, akungabazeki ukuthi ingxoxo yevidiyo izokhula ngomthelela. I-Gartner ilinganisela ukuthi ngaphezu kwe-100 yamabhizinisi amakhulu emhlabeni wonke we-500 azokwethula ingxoxo esekwe kwividiyo ngo-2018 ngokuxhumana okubhekene namakhasimende
Uyini Umphumela Wengxoxo Yevidiyo Ekuthengisweni?
Inkampani eyodwa esebenzisa ingxoxo yevidiyo ubone ukwanda okuphindwe kayishumi enanini lezivakashi ezithenga, kanti inani elilinganisiwe elisetshenzisiwe nalo lenyuka lisuka ku- $ 10 laya ku- $ 100
Amapulatifomu wengxoxo yevidiyo anikezela ngezici eziningi, njengokuhlanganyela kwesikrini, ukuphequlula ngokubambisana, ukuqopha, nokuxoxa ngombhalo; kodwa-ke, isici esihle kunazo zonke kungaba yikhono lokuthi abantu babhekane emehlweni ukuze bakhe uxhumano olusheshayo lomzwelo komunye nomunye. Izinzuzo azigcini lapho, noma kunjalo. Ngamandla oku empeleni babonane futhi babelane ngezikrini, ingxoxo yevidiyo izokwenza izinkampani zisebenzise isikhathi esincane ukuphenya ngezinkinga nesikhathi esiningi ukuzixazulula. Lokho, nakho, kuholela ekwandeni okuphawulekayo ekwanelisekeni kwamakhasimende.
Abathengisi bakhiphe ifayili le- inketho yengxoxo yevidiyo ye-Health Cloud yayo. I-Telehealth ivumela ochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo ukuthi baxhumane ngqo neziguli ngevidiyo kumadivayisi weselula we-Android noma we-iOS, nezinketho zokwabelana ngezikrini. I-AppExchange iphinde inikeze ezinye izixazululo, kufaka phakathi VeriShow, I-Talkfest, Zoom, Futhi Ukubabaza. Akungabazeki ukuthi ezinye izixazululo zizofika - ikakhulukazi manje njengoba zonke iziphequluli ezinkulu zedeskithophu nezamaselula zisekela umsindo nevidiyo ngokwendabuko.
Nayi i-infographic ephelele, kanye namathiphu amahle wokuthuthukisa ikhwalithi yezingxoxo zakho zevidiyo!
Tags: ukuguqulabaxoxeUkubabazasalesforceinani labathengisi infographicukwabelana kwesikriniI-TalkfestVeriShowamakholi wevidiyoingxoxo yevidiyoukwesekwa kwevidiyozoom